Dowladda Soomaaliya oo go?aamo adag ka soo saartay colaadda dhul-beereedka ee gobolka Hiiraan – Radio Daljir
Diseembar 20, 2013 2:07 b 0
Beledweyne, December 20, 2013 – Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa go?aan ka soo saartay dagaalka beelaha ku salaysan ee ka dhacay gobolka Hiiraan horaantii bishan, kaas oo ay dad badan ku dhinteen isla markaasna kuwa kale ku baragkaceen.
Wasiirka KMG ah ee khayraadka dalka Dr. Cabdirisaaq Cumar Maxamed ayaa sheegay in dowladdu tagtay meelihii dirirtu ka dhacay, isla markaasna ay soo saartay go?aamo dowladeed oo cidii jebisa loo aqoonsanayo fidno-wade.
Dowladda ayaa go?aamisay in la joojiyo colaadda, in la kala qaado malayshiyada is hor fadhiya, in cidii lagu arko hub loo aqoonsado fidno-wade iyo in dib u dejin loo sameeyo dadkii baragkacay, federaalka ayaana kormeeraya fulinta go?aankaas.
Wasiirku waxaa uu xaqiijiyey in dib u dejin loo samayn doono baragkacayaasha isla markaasna gargaar bini?adanimo la gaarsiin doono, Dr. Cabdirisaaq ayaa xusay in dowladdu talaabo adag ka qaadayso cidii jebisa go?aanka ay soo saartay ee xasiloonida lagu doonayo.
Ciidamada AMISOM, kuwa Itoobiya iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa wasiirku u soo jeediyey inay talaabo ka qaadaan cid kasta oo amni daro iyo? colaad ka abuuraysa gobolka, go?aanka dowladda ilaa hadda dhinacyadu kama aysan hadlin balse AMISOM ayaa sheegtay inay ku dadaalayso inaan colaad dambe dhicin
Dagaalka ku salaysan beelaha ayaa ku soo noq noqday deegaanka Kabxanley ee gobolka Hiiraan, halkaas oo dadka degan ay dhowr jeer dirir dhexmartay iyagoo isku haysta dhul-beereed ku yaala deegaanka, dowladda ayaa ku baaqday in colaadda la joojiyo, dhowaanse ayaa la filayaa in heshiis la dhex-dhigo dhinacyada dagaalamay.